”Nebi Muxamed (NNKH) wuxuu ahaa qofkii ugu cuslaa ee caalamka soo mara!” – Michael Hart | Hadalsame Media
Home Ku Biiri Aqoontaada ”Nebi Muxamed (NNKH) wuxuu ahaa qofkii ugu cuslaa ee caalamka soo mara!”...
(Hadalsame) 09 Nof 2019 – Michael Hart waxaa uu 28 sano qorayey buuggiisa lagu magacaabo العظماء المائة kaasoo uu kusoo qaatay 100 kii qof ee ugu saamaynta badnaa ee dunida soo maray.
Hadalladii uu ka jeediyey bandhigga buuggisa oo lagu qabtay magaalada London waxaa kamid ahaa hadaladiisa:
”Waxaa rumeeyey 4 qof islaantiisa, saaxiibkiis iyo laba ilmood.
Hadda waxaa laga jooga soo bixitaanka nabigaasi NNKH wax kabadan 1400 sano tirada muslimiintana waxa ay gaartay wax ku dhow laba bilyan maalin kastana tiradiisa waa ay sii siyaadaysaa macquul ma ahan in nabigaasi uu been sheegayey, mana suura galayso in beenni ay noolaato 1400 oo sano mana jiro qof qaldi kara laba bilyan oo qof.”
Majiro qof masiixi ah oo naftiisa u huraya nabigiisa ama xitaa rabbigiisa. Maxammed waa qofkii ugu cuslaa ee dunidan soo maray”.
Waxaa Diyaariyay: Ibraahim Aadan
Previous articleDAAWO: Gabdho Soomaali ah oo ka cowday XADGUDUBYO ay ka mutaan Isbitaalka Masaarida ee Muqdisho (Eed saaran DF Somalia)
Next articleDAAWO: ”War waa anigii!!” – Mr BEAN oo ka sheekeeyay hal arrin oo DHIBAATO ba’an ku haysa!!